Maxaan ka ognahay doorashada Kismaayo? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaan ka ognahay doorashada Kismaayo?
Doorashada maanta ka qabsoomeysa Kismaayo waxay bilow u noqon doonta doorashooyinka sanadkan oo la rumeysan yahay inay ka duwanaan donaan doorashooyinkii hore.
KISMAAAYO, Soomaaliya - Xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland, Kismaayo, ayaa dhawaan la filayaa in ay soo saarto Sanatarkii ugu horreeyay ee ka mid noqonaya Baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, taas oo iba-fur togan u noqon karta hannaana doorashooyinka dalka.
Tartanka doorashada Aqalka Sare, ee Maamulka Jubbaland, ayaa la filayaa inuu noqdo midka ugu saameynta yar, marka loo eego maamullada kale, waxaana middaas loo aaneynayaa in Axmed Madoobe, uu ka shaqeeyay hannaan fudud oo saaxiibadiis ugu guuleysan karaan Kuraasta.
Sida ay Keydmedia Online u sheegeen ilo xog ogaal ah oo ku sugan magaalo madaxda Jubbada Hoose, qaar ka mid ah musharixiinta ayaa xalay lacag bixiyey, waxayna Baarlamaanka Maamulka Jubbaland xalay ku dhameysteen soo jeed iyo gorgortan ku aaddan lacagta cod siinta.
Kursiga la rumeysan yahay inuu ugu loolan adag yahay, ayaa dhex yaalla Ilyaas Badal Gaboose, Sharmaake Maxamed Cabdi Gaandi iyo Axmed Maxamed, hayeeshee, musharaxa ugu badan ayaa xalay qeybiyay $3000, taas oo ka dhigan in Kismaayo noqtay magaalada ugu loolanka yar.
Qaar ka mid Baratamayaasha, ayaa la soo warinayaa in aysan bixin doonin wax lacag ah, maadaama ay wataan musharixiin malxiis u ah, oo sida la sheegayo is casili doona marka hoolka doorashada gudaha loo galo.
Afarta kursi ee maanta soo bixi doona, waxaa la saadaalinayaa in kala noqdaan Ilyaas Badal Gaboose, oo aan saaxiib gooni ah la ahayd Madoobe, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag) iyo Iftin Xasan Baasto, oo ka mid ah difaacayaashii Madoobe, iyo musharrax Cabdirisaaq Xasan Cusmaan.